Caro ka dhalatay Kufsigii gabadh 14 jir ah loog u geystay Guriceel, muuqaal na laga duubay - BBC News Somali
Caro ka dhalatay Kufsigii gabadh 14 jir ah loog u geystay Guriceel, muuqaal na laga duubay
Image caption Falkan ayaa noqday mid aysan filaneyn dadka deegaanka
Waxaa isasoo tareysa carada ka dhalatay kufsi wadareed magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud loogu geystay gabadh da'deeda lagu sheegay 14 jir, iyadoo muuqaal laga duubay dhacdadaasna uu si weyn ugu faafay baraha xiriirka bulshada.
Wararka ay BBC-da heshay ayaa sheegaya in kufsi wadareedkan gabadha da'da yar loo geystay, oo dhacay dhowr isbuuc ka hor ay ku dhaqaaqeen 4 nin oo dhalin yaro ah isla markaana saaxiibo ah.
Xubnaha qoyska ay gabdha dhibanaha ah ka soo jeeddo oo ay BBC-da la xiriirtay ayaa ka gaabsaday iney faahfaahin ka bixiyaan dhacdadaas saameynta baaxadda leh ku yeelatay, waxayna ka cudur daarteen iney xilligan ka hadlaan.
"Waxaan maqlay in gabadha ay saaxiib la ahayd mid ka mid ah 4-ta wiil ee kufsatay. Dadka qaar waxay sheegayaan iney xaafad ugu tagtay, qaarna waxay dhaheen gaari ayaa lagu qaatay. Laakiin si walbaba haku tagtee, waxaa la geeyay guri, muuqaal laga soo duubay iyadoo ka codsaneysa iney sii daayaan ayaa la soo dhigay baraha xiriirka bulshada, aniguna waxaan ka mid ahay dadkii arkay muuqaalkaas. Waxaa la sheegay in wiilasha qaarkood ay iyagoo aan wax dhar ah qabin iyaduna ay qaawan tahay ay la galeen sawirro, markii la kufsadayna waxaa lagu yiri muuqaalladan ayaan kaa heynaa, haddii aad na sheegtana way faafayaane ogow".
Puntland oo ka soo saartay sharci cusub kufsiga
Nafisa ayaa sheegtay in raggii gabood falkan lagu eedeeyay ay hadda ku jiraan gacanta ciidanka amaanka.
"Maalmo ka dib muuqaalladii waxay soo galeen baraha bulshada. Caro weyn ayaa ka dhalatay, ciidamada booliska ee degmada Guriceel ayaa isxilqaamay waxayna soo xireen 4-tii nin ee eedeysaneyaasha ahaa. Gabadhiina waxaa la geeyay isbitaallo ku kala yaalla Guriceel, Hargeysa iyo Gaalkacyo, oo ay haddaba ku sugan tahay".
Gabadhan oo aan wali magaceeda la shaacinin ayaa ahayd ardayad dhiganeysay fasalka 3-aad ee mid ka mid dugsiyada sare ee degmada Guriceel.
Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa dalbanaya in tallaabo sharci ah laga qaado dhallinyaradaas oo la filayo iney dhawaan maxkamadda ka soo hor muuqdaan.
Guurka oo aad uga sahlan gobolka
Nafisa ayaa sidoo kale BBC-da u sheegtay in ficilkan uusan ahayn mid ah dadka deegaanka ay filanayeen.
"Waxaa deegaannadan ku badan furriinka, sababtuna waa in dadku iyagoo aad u da' yar ay isguursadaan, maadaama uu aad u sahlan yahay guurka, sidaas daraadeed dadka deegaanka waxay qaadan waayeen in deegaankii oo sidaas uu guurka uga fudud yahay uu haddana ka dhaco fal kufsi ah".
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey Nafisa sheegtay in dhallinyarada kufsigan geysatay ay qaarkood xaasas leeyihiin.
"Waxaa arrin laga argagaxo nagu noqotay in dhallinyaradii oo si fudud ku guursan kara ay ficilkan foosha xun ku kacaan, inkastoo aan maqlay in ragga gabadha kufsaday ay qaar ka mid ah reero leeyihiin xaasaskoodana ay guryaha u joogaan".